Vaovao - Ho avy amin'ny fikajiana mandeha ho azy
milina mandeha ho azy orbital welding
milina fantsom-bozaka kely mandeha ho azy
Ny hoavin'ny welding mandeha ho azy
Izy io dia fironana amin'ny fananganana fantsom-pandaharam-pahendrena amin'ny ho avy hampiasa milina fantsom-pahefana mandeha ho azy. Mazava ho azy ny fironana takiana feno amin'ny milina fantsom-pahefana mandeha ho azy. Ny famafana fantsona mandeha ho azy amin'ny tena heviny dia manome antoka ny fifehezana maharitra ny fizotran'ny welding, ny fiarovana tsara ny arc sy ny pisinina molten, manome antoka ny hamafin'ny fantsom-panafody ary manome antoka ny kalitaon'ny welding. Ny olana amin'ny tavoahangy famerana ny famerana ny fizotran'ny fanamafisam-peo mandeha ho azy dia nohatsaraina, ary nohatsaraina ny fahombiazan'ny asa. Ny fantsona fantsona mandeha ho azy amin'ny toerana rehetra dia midika fa raikitra ny fantson-drano, ary mihodina manodidina ny fantsona ny lohan'ny fantsona mandeha ho azy mba hahatsapana ny fantsom-pifaneraserana amin'ny toerany rehetra, ny fantsom-pifandraisana ary ny fantsona ambony. Ny fizotran'ny famafana iray manontolo dia vitan'ny welder amin'ny alàlan'ny tabilao fanaraha-maso lavitra, izay tsy dia misy fiantraikany amin'ny olombelona ary tsy miankina amin'ny welder. Noho izany, ny milina fantsom-pifaneraserana fantsona mandeha ho azy amin'ny toeran'ny pipeline dia manana tombony amin'ny kalitaon'ny fikajiana tsara, ny fahombiazan'ny welding avo lenta ary ny tsy fitovizan'ny kalitao tsara.
Miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia sy ny informatization, ny fananganana fantsona dia mandroso tsikelikely mankany amin'ny digitalisation, informatization, intelligence, ary ny fahombiazany. Ireo tetikasa hatomboka amin'ny ho avy dia handray ny haitao mandeha ho azy tanteraka amin'ny ambaratonga lehibe. Amin'ny ho avy, X90, X100 ary na dia fantsona avo lenta kokoa aza, fantsona misy savaivony 1422 mm ary misy savaivony lehibe kokoa aza, dia handray ny haitao mandeha ho azy amin'ny ambaratonga lehibe.
HW-ZD-200 andian-tsarimihetsika milina mandeha ho azy dia milina fantsom-pahefana mandeha ho azy ao an-toerana novolavolain'ny orinasa Tianjin Yixin tsy miankina. Fanavaozana siantifika sy teknolojia lehibe an'ny orinasa Yixin izy io. Afaka manatsara be ny fahombiazan'ny famokarana sy mampiroborobo ny asa fananganana injeniera. Miova avy any amin'ny farany ambany mankany amin'ny farany ambony. Ny famafazana fantsom-pifandraisana mandeha ho azy amin'ny tena heviny dia manome antoka ny fifehezana maharitra ny fizotran'ny welding, ny fiarovana tsara ny arc sy ny pisinina molten, manome antoka ny hamafin'ny fantsom-boaloboka, manome antoka ny kalitaon'ny welding, mamaha ny olan'ny tavoahangy izay mametra ny welding tsy mandeha ho azy fivezivezena amin'ny fanamboarana mikoriana ary manatsara ny fahombiazan'ny asa.
Fotoana fandefasana: Mar-26-2021
ny dian-tongotra, ny mpitarika, ny fanavaozana, ny vokatra
Inona no atao hoe mari-pahaizana momba ny fomba welding
Fampiharana sehatry ny welding otomatis
Telefaona: 0086-15138903401 / 0086-13034303972
Mailaka: lxy@yixinpipe.cn / mahy@yixinpipe.cn / info@yixinpipe.cn
Adiresy: Faritra fampandrosoana Xiqing, Tianjin, Sina
© Zon'ny mpamorona - 2020-2021: Voatahiry ny Zo rehetra. Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile